Akụkọ - Kedu uru nke sistemu njikwa ụlọ nkwakọba ihe RFID?
Kedu uru dị na sistemụ njikwa ụlọ nkwakọba ihe RFID?
Otú ọ dị, ọnọdụ dị ugbu a nke ọnụ ahịa dị elu na arụmọrụ dị ala na njikọ ụlọ nkwakọba ihe, site na nyocha nke ndị ọrụ ụlọ nkwakọba ihe nke atọ, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ndị ọrụ ụlọ nkwakọba ihe ndị ọzọ, a chọpụtara na njikwa ụlọ nkwakọba ihe ọdịnala nwere nsogbu ndị a:
1. A na-achọ itinye ihe ndị ahụ n'ụlọ nkwakọba ihe, ma ezigabeghị akwụkwọ ikike ụlọ nkwakọba ihe, yabụ enweghị ike itinye ya n'ọrụ ozugbo.
2. Ụgbọ ala a na-ebufe anọghị ogologo oge. Mgbe ịlele ngwa ahịa, a na-achọpụta na ngwongwo ahụ anọghị n'ụlọ nkwakọba ihe.
3. A na-etinye ihe ndị ahụ na nchekwa, mana echefuru idekọ ebe nchekwa ma ọ bụ na-edekọ ebe nchekwa na-ezighị ezi, ọ na-ewe ọkara ụbọchị ọzọ iji chọta ngwaahịa ahụ.
4. Mgbe ị na-ahapụ ụlọ nkwakọba ihe, ndị ọrụ kwesịrị ịgba ọsọ na-aga n'ihu n'ọtụtụ ụlọ nkwakọba ihe, na oge nchere maka ụgbọ ala dị ogologo.
5. Efere bụ naanị ụbọchị ole na ole, ya mere arụmọrụ dị ala n'ezie, na arụmọrụ dị ala, na-enwekwa mmejọ ugboro ugboro.
6. Enwere ike ịgụta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwaahịa ọdịnihu dị nso mgbe ọ bụla a na-ewere ngwaahịa ahụ, na nke mbụ, nke mbụ aghọwo okwu efu.
Ịdị adị nke nsogbu ụlọ nkwakọba ihe ndị dị n'elu enweela mmetụta ọjọọ na mmepe na ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ, ọ dịkwa mkpa iji dozie ngwa ngwa ma melite ọkwa nchịkwa ụlọ nkwakọba ihe. Mpụta nke sistemu njikwa ụlọ nkwakọba ihe RFID na-enye ụlọ ọrụ ụdị njikwa ụlọ nkwakọba ihe dabara adaba karịa nke ọma na nke nwere ọgụgụ isi.
Yabụ, na-eche nsogbu ụlọ nkwakọba ihe dị n'elu ihu, kedu uru dị na sistemụ njikwa ụlọ nkwakọba ihe RFID?
1.UHF RFID mkpado
Site n'iwepụta RFID mkpado eletrọnịkị maka pallet ọ bụla na ebe nchekwa dị na ụlọ nkwakọba ihe, yana ngwá ọrụ pụrụ iche dị iche iche, ọ nwere ike ịghọta njirimara akpaaka nke pallet na ozi nchekwa ngwaahịa, nke na-eme ka onye ọrụ ahụ dịkwuo mfe ijikwa ngwa ahịa ngwaahịa.
N'otu oge ahụ, site na UHF RFID mkpado na-ejikọta na ngwongwo, ọ nwere ike ịmata ọdịiche dị n'ezie nsogbu nchịkwa dị ka ogbe, ihe nlereanya, aha ngwaahịa, oge nkwakọba ihe, onye na-ebubata ya, ọkwa, wdg, na njikwa na njikwa na-adabere na mkpa nchịkwa nke oge a.
Enwere ike ịmekọrịta ọrụ ịnata kwa ụbọchị na ngwaọrụ RFID ejiri aka, ma ị nwere ike ịmata nkọwa nke ọrụ ahụ na-enweghị akwụkwọ nnata.
Ọ dịghị mkpa ka edekọ data nnata ahụ na aka gị, na usoro ahụ na-anakọta na-akpaghị aka ma gụọ iji hụ na izi ezi nke data nnata.
Mgbe ngwongwo ndị ahụ rutere n'ụlọ nkwakọba ihe, usoro ahụ ga-emelite ọnụ ọgụgụ ngwa ahịa na-akpaghị aka na ụlọ nkwakọba ihe, na akwụkwọ ga-agwụkwa.
Mgbe Sistemụ njikwa ụlọ nkwakọba ihe RFID Ejikọtara ya na forklift RFID, enwere ike ịnye ọrụ shelf na forklift RFID maka igbu ya.
Ihe forklift RFID na-enyocha pallet na-akpaghị aka, na-egosiputa ozi ibu nke pallet na ozi nkwakọba ihe, nyefee ebe nchekwa nke ibu ahụ ozugbo, ma na-abawanye ngwa ahịa na shelf.
Sistemu ahụ ga-ebuli ụzọ ije ije na-akpaghị aka, ọ dịghị mkpa ịgagharị azụ na azụ, naanị otu ije iji mechaa iburu ngwongwo.
RFID forklifts na-enyocha mkpado pallet RFID iji nyochaa ngwa ngwa ozi nke ngwa a na-apụ, ma nwee ike mee nkwenye nke mbụ na nke mbụ iji kwalite ngbanwe ngwa ahịa.
Mgbe emechara ọpụpụ ahụ, a na-ebelata ngwa ahịa ọpụpụ na-akpaghị aka.
5. Ndepụta Ngwaahịa
Ọ dịghị mkpa maka akwụkwọ ndekọ aha nnata, na RFID mobile ikpo okwu na-arụ ọrụ nwere ike ikuku na-elele usoro nnata online.
Ọ dịghị mkpa iji aka dekọọ ozi data ngwa ahịa, na sistemụ na-akwado ndekọ ọrụ saịtị.
Ngwakọta ngwa ahịa ziri ezi ruru ọkwa ọnọdụ na ọkwa pallet, na-eme ka ngwa ahịa dị mfe iji mejuputa na ime ya; kwado ngwa ahịa na ụlọ nkwakọba ihe n'ime na azụ ahịa n'otu oge.
Ejikọtara ya na iji forklift RFID, ngwa ahịa ngwa ahịa na-adị ngwa ngwa, yana data dị iche iche na-achịkọta data na-akpaghị aka.
Ngwa nke sistemu njikwa ụlọ nkwakọba ihe RFID na-eme ka ọrụ ụlọ nkwakọba ihe dị mfe kwa ụbọchị, a na-anakọta data na akpaghị aka ma na-emelite ya, na-ewepụ mkpa ntinye akwụkwọ ntuziaka, si otú ahụ mepụta ụlọ nkwakọba ihe nwere ọgụgụ isi na akpaaka maka ụlọ ọrụ ahụ iji belata ụgwọ ọrụ yana ịbawanye arụmọrụ. .
Oge nzipu: Dec-31-2021